Sep 13, 2007, 11:22:00 PM
Sep 14, 2007, 12:53:00 AM
ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့ ပင်မအကြောင်းရင်းတွေအားလုံး ရှင်းလင်းပြီးမယ့် တနေ့
Sep 14, 2007, 1:13:00 AM
Hmmm... I can't understand that how come some people want to disturb other people happiness.. Do they feel better after doing that..
Sep 14, 2007, 2:05:00 AM
Sep 14, 2007, 5:21:00 AM
ဒီနေ့ကစပြီး ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ အမည်မဲ့တွေကို အသုံးပြုခွင့် မပေးတော့ပါဘူး။ အမည်မဲ့တွေကို အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တာဟာ ရေးထားတဲ့စာတွေအပေါ်မှာ အမြင်အမျိုးမျိုးရှိကြတာတွေကို အခက်အခဲ မရှိ လွတ်လပ်စွာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ပါ။ အခုလို အကျိုးမရှိ လိုက်ပြီးတော့ ရန်စ နှောက်ယှက်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားသော စာဖတ်သူတွေကို ငဲ့ကွက်ပြီးတော့ ကိုယ့်လုပ်ရက်ကို ကိုယ် ရပ်တန်းက ရပ်ကြပါ။ ဒီထက်ပိုဆိုးလာရင် ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကိုပါ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုခွင့် ပိတ်ပင်ခံရပါလိမ့်မယ်။
Sep 14, 2007, 6:24:00 AM
ဒီလိုပဲ ခြိမ်းခြောက်တိုင်း မရေးတော့ပဲ ရပ်ရပ် နေကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘလော်ဂါတွေတော့ နောက်ဆို လျော့လျော့လာတော့မှာပဲ။ အခုတောင် ဘလော်ဂါ တစ်ယောက် ဈေးဦးပေါက် ခေါ် စစ်ဆေးခံရတယ် ဆိုသလားပဲ။ စိတ်ညစ်ပါတယ်ဗျာ...
To Kalo SayHtoo
I appreciated that idea.
Otherwise it happens to read the foul language on the blog.
I think by this time Philtre is really grudged and grumbled.
I don't understand with like Philter's attitude how do they lead the country.
Sep 14, 2007, 8:40:00 AM
လွတ်လပ်စွာ ရေးသားနိုင်တဲ့ blog လိုနေရာမှာတောင် မလွတ်ဘူး နှောင့်ယှက်မှုတွေနဲ့နော်။ blog လောက မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေမှာပဲ ဒီလို ပြသာနာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ရှက်စရာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ နှောင့်ယှက်တဲ့သူတွေ သေချာပြန်စဉ်းစားပါ ကိုယ်ဘယ်လိုလူလဲ ဆိုတာကို။
(မ)မေဓာဝီ၊ ကျွန်တော်က အမရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ပါ။ ဖတ်စရာ blog ကောင်းတခုမရှိတော့တာ တခုခုလိုနေသလိုပဲ။ မကြာမှီ blog ပြန်လည်ရေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
မမေblog မှာphiter နဲ့ တခါရန်ဖြစ်ခဲ့ ဘူးတယ်။ ဒါတွေကြောင့်ဆိုရင်တော့ မမေကို sorry လို့ ပြောပေးပါ ကိုစေထူး။
Sep 14, 2007, 9:40:00 AM
မမေကို အမြန်ဆုံး စာပြန်ရေးစေချင်ပါတယ်။ မမေရဲ့ ပို့စ်တွေကို ဖတ်ရတာ စာဖတ်သူကို စေတနာ အရမ်းထားတယ်ဆိုတာ ခံစားလို့ရပါတယ်။
မမေ blog လေး အရင်လို ပြန်ဖြစ်လာဖို့ မဝေးတော့တဲ့ တနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
Sep 14, 2007, 11:33:00 PM
ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ရှိနေတာသိရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ အာလုံးက ကိုယ့်အကြောင်းတွေနဲ့ကိုယ်ပဲမို့ စာပြန်ရေးပါလို့ မတိုက်တွန်းပေမယ့် မမေပြောတဲ့ တစ်ချိန်ချိန်ဆိုတာကို စောင့်နေတယ်။ မေတ္တာဖြင့်။
Sep 15, 2007, 4:20:00 AM
ယုံကြည်ချက်တွေ ရည်မှန်းချက်တွေ ခိုင်မာနိုင်ရင်တော့
အကောင်းဆုံးပေါ့ လေ ၊ ဒါပေမဲ့ လည်း ရည်မှန်းချက်ဆို
တာ တခါတလေ မှာအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ ကြန့် ကြာတတ်တာမျိုးတော့ရှိတတ်
တယ်။ ယုံကြည်ချက်ကတော့ သွေဖယ်မသွားသင့်ဘူးပေါ့
Sep 15, 2007, 5:03:00 AM
to khin myanmar...
i don't have enough time to respond u properly at the moment and can't also use burmese font to compose farbulous poem for u. i am away from home at the moment.. u can assume that this is really lucky time for u. but i wanna know ur email addres if u dare to tell me. what i surprise is why the hell are u using my name in ur every single comment. can't u write down evenasingle comment without my name.. pls visit to my gtalk to give me ur reason.. there u go.. philtre.soe@googlemail.com ..
P.S This is the last warning for u.. pls don't use my name again for ur next comment
Sep 15, 2007, 6:19:00 AM
I just happened to know that you stopped your blog because I was away from internet about3weeks. I tried to go your blog and I just see search blog page. You may not able to read my comment because you may not able to use internet as per usual as your explanation.Anyway, I missed your blogalot. You are miracle.I'm very sad to know about your blog.Why not you try to control comment on your blog and continue to write. I hope to see you again.
မမေ ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အရာအတွက် အသိအမှတ်ပြု လေးစားဂုဏ်ယူနေပါမယ်။
Walk on ........ Ma May ........ any way ......... any time ......
Sep 17, 2007, 5:38:00 AM